Abesifazane abaningi bafunde ukuthi zisesimweni ukufuna ngokushesha ukuthi bangobani ozozalwa. Ezinye zazo bayajabula wesilisa noma wesifazane wengane, abanye bafuna nje umfana noma intombazane futhi babheke phambili lapho okufanayo ziyonquma ubulili umbungu fanele.
Ngasiphi isikhathi ungakwazi ukuthola ucansi ingane kangcono? Lena inkinga eyinhloko okuhlasela cishe njalo ambalwa, elinde umntwana. Cishe eziyikhulu namashumi amaphesenti okungenzeka kuyoba inkathi cishe izinyanga eziyisithupha ekhulelwe. Ngiyavuma, inkathi ngokwanele eside ukuthi kungaba ezinikele ukunakekela ingane ikusasa futhi ngokwami, ngoba kubalulekile hhayi phansi, futhi impilo esizayo ingane.
Ochwepheshe abaningi bangase baphikise ngokuthi isinqumo kusolwa zingafundwa kakade amasonto 12 esesibelethweni, futhi u-40% amacala kuqinisekiswa. Ngakho-ke, uma bahlushwe umbuzo wokuthi kulokho isikhathi ungakwazi ukuthola ucansi wengane, cela Uzi ehhovisi Uchwepheshe ngaphezulu, okuyinto uqhuba luhlolo isimiso. By endleleni, kukhona bezibona ukuthi ukuthembeka yi kuthinta iqophelo imishini kanye nempahla yalo. Okusho ukuthi, uma inhlolovo Kwenziwa usebenzisa idivayisi zobuchwepheshe nge inzwa super-sensitive, esiphethweni okuholela, kungaba kubhekwe esinembile.
Ngaphezu izindlela zokwelapha, kukhona abanye ezingakusiza ukuthola ucansi ingane. ungakwazi ukuchaza usebenzisa izindlela ethandwa ku ngesonto? Konke kuncike isimo. Ngokwesibonelo, uma umama esizayo kusukela ezinsukwini zokuqala zokukhulelwa ukudansela isiginci sakhe kwi amnandi, cishe yena ulinde indodakazi yakhe, kodwa uma ufuna ukudla inhlanzi solenenkoy, kuyisiko ukupha abashadayo bathi yena ulinde indodana yakhe. Omunye izindlela zokuxilonga ethandwa ezihilela uhlobo besisu, bethi ukubukeka kwayo oyindilinga uthembisa intombazane, futhi oyingozi-angled - umfana. Yiqiniso, lezi zibalo ningathwali kwewaranti, futhi amathuba ukwethembeka lincane kakhulu, nakuba amuses abantu abaningi.
Ngasiphi isikhathi ungakwazi ukuthola ucansi wengane, usebenzisa indlela ye biopsy chorionic? Le ndlela uyakwazi ukunikeza impendulo kakade amasonto 7-10 yokukhulelwa. Nokho, qaphela ukuthi le ndlela akuphephile impilo umntwana ongakazalwa futhi kwesisu kusongelwa. Akukhona neze umama ezinengqondo obala wena kanye nengane yakho ezingozini ezinjalo ngenxa ilukuluku, uyakukholelwa wena?! Ngokuvamile, chorionic villus amasampuli benzeni khona omunye wabazali izifo ezinzima sitholwa njengefa. Imiphumela yaloku kuhlola okungenhla Esifike Ngesikhathi kungavimbela ukuthuthukiswa kombungu esizalweni ku-fetus noma ukuba akhiphe isisu ngezizathu zezokwelapha.
Kuwo wonke la izindlela iyona efanele kakhulu isimiso ultrasound cwaningo, okuyinto ngokuhamba evamile yokukhulelwa kwandisa amathuba ejele. Kwezinye izimo akunakwenzeka ukwazi ubulili wengane, kulokho ubungeke ezilibiza kungase ukukwenza. Iqiniso ukuthi urchin kancane angase aqale ukuba nezinye ayoziveza kakade kwesisu likamama, bese elithatha ubuso bakhe ngezandla zakhe futhi efulathela kubazali bayo.
Kungani abazali abaningi kangaka ukhathazekile ngalokho, ngalokho isikhathi ungakwazi ukuthola ucansi ingane kangcono? Kwamanye kungcono ilukuluku elula, umuntu usuqalile ukuqoqa isipho futhi uthenge odezhku umntwana, kodwa kwabanye kubaluleke ayisisekelo, ikakhulukazi uma kuziwa ifa. Nakuba, yebo, konke lokhu akusho lutho, ngoba okokuqala kwezithelo zonke izithelo - iyona ingane esizayo, obazali bakhe kukhona noma kunjalo ngeke bathande.